Himalaya Dainik » मेरो आँशु मात्र हेर्न चाहनेलाई मेरो बिहेको निर्णयले पोल्नेछः श्वेता खड्का
10 mins अगाडी
अभिनेत्री श्वेता खड्काले आफ्नो जीवनको दु:खद अध्याय बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमाा पुगेको बताएकी छन्।
उनले धनगढीका विजयेन्द्र सिहं रावतसँग लगनगाँठो कस्न लागेकी हुन्।
श्वेताले थप लेखेकी छन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवश्य छ- के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णय स्वीकार गर्ला र? मलाई थाहा छ, श्वेताको आँखामा आँशु मात्रै देखिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका दुई चार जना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ।’
म: जीवनको नवीन यात्रामा।
जीवनका विभिन्न आरोह-अवरोह, उकाली-ओराली, सुख-दु:ख अनि हाँसो-रोदनका पललाई आत्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आइपुगेकी छु।
जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले जे-जस्ता पीर, व्यथा, दु:ख अनि कष्टसँग सामना गरेकी छु, त्यसभित्रको कहालीलाग्दो अनुभवहरूलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु।
‘अचानोको पी_डा खुकुरीलाई थाहा हुन्न’ भनेझैं समयको दुश्चक्रले ममाथि प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पीडा केवल मलाई मात्र थाहा छ।
मैले मृत्‍युलाई रोजिनँ, जीवनलाई नै रोजेँ। अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरूसँग जुध्दै क्रमश: अगाडि बढ्दै गएँ।
म देख्थेँ, मेरो अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो जसमा तिखा काँडा, ठूलाठूला पत्थर अनि आगोको ज्वाला छरपस्ट भएर छरिएका छन्।
मैले मेरो जीवनको बाटोमाथि छरपस्ट ती काँडाहरूलाई पन्छाउनु पर्नेछ। पत्थरहरूलाई फुटाउनु पर्नेछ। अनि आगोको ज्वालाहरूलाई नाघ्नु पर्नेछ।
‘के म यसो गर्न सकुँला र?’ आफैंसँग प्रश्न गर्थेँ। आफ्नै प्रश्नमा आफैंले उत्तर दिन्थेँ, कि हुत्ती हारेर मर्नु पर्छ कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’
अत: मैले मृत्‍युलाई रोजिनँ, जीवनलाई नै रोजेँ। अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरूसँग जुध्दै क्रमश: अगाडि बढ्दै गएँ।
‘एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ’ भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत ६ वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेकी थिएँ म। मेरो यो एकल यात्राका बखतमा धेरैपटक ल-डेकी छु।
मैले साथीसंगतीहरूको भिडमा आँखा डुलाएर हेरेँ, तर मेरो पीडालाई महसुश गर्न सक्ने कोही देखिनँ। आफन्तको घेरामा खोजेँ तर माइतीमा शरण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पी-डा पोखेर माइतीलाई थप तनाव दिनु हुन्न भन्ने मनन गरेँ। अत: मेरो हरेक दु:खमा म एक्लै रोएँ, पीडाहरुमा आफैं सम्हालिएँ अनि अनेकन समस्याहरूसँग एक्लै जुधिरहेँ।
‘मेरो एकल जीवनलाई नियालिरहेका मेरा धेरै हितैषीले एउटा जीवन साथी खोज्नका लागि नसुझाएका पनि होइनन्। तर एकपटक पुछिएको सिउँदोमाथि पुन: सिन्दुर भर्न आँट गर्ने कुनै निःस्वार्थी हातहरू पाइन्छ र?
फुटेको चुरासँगै चक्ना-चुर भएको मेरो विगत जोडेर एउटा सुन्दर आकार दिने स्वच्छ मनको धनी कोही भेटिन्छ र?
अनि विगतमा मैले गुमा-एको मेरो चोखो मायालाई पुन: फर्काएर मेरो जीवनमा खुसीको रङ भरिदिने कुनै दयालु मन पाइएला र? लौ, भनेको जस्तो निःस्वार्थी, स्वच्छ र निष्कपटी व्यक्ति पनि पाइयो रे। अनि के यो पुरूष प्रधान समाजले मेरो दोश्रो जीवनलाई स्वीकार गर्ला र?’ म मेरा हितैषीलाई प्रश्न गर्थेँ।
मैले मेरो अतीतलाई चटक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन। अतीतका मीठा पलहरुलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्यलाई सजाउने नविन यात्राको थालनी
आज, मैले मेरो एकल जीवनमा एउटा सहयात्री पाएकी छु। विगतको पीडालाई भुलाउने एउटा बहाना पाएकी छु। मेरो अतीतलाई सहर्ष स्वीकार गरी मसँगै सुख र दु:ख बाँड्न तयार एउटा साथी पाएकी छु।
म, जीवनको दु:खद अध्यायलाई बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु।
मलाई थाहा छ ‘श्वेताको आँखामा आँशु मात्रै देखिनु पर्छ’ भन्ने सोच बोकेका दुई चार-जना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ।
श्रीमती स्वर्गीय भएको एक महिना नबित्दै नयाँ दुलही भित्र्याउन हतारिने तर घरकी बिधुवा बहिनीले पूरै जीवन एक्लै का-ट्नु पर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त केही व्यक्तिलाई मेरो यो निर्णयले चसक्क घोच्नेछ।
अत: कोरोना सन्त्रासका बीच जुरेको खुसीको माहौलमा मैले मेरा धेरै मित्रहरू, गन्यमान्य व्यक्तित्वहरू, संचारकर्मीहरू लगायत मेरा आफन्तहरू समेतलाई सामेल गराउन असमर्थ हुनेछु।
महामारीको यो माहौलमा सीमित व्यक्तिहरूलाई साक्षी राखी जीवनको नयाँ यात्रा सुरू गर्दै गर्दा तपाईंहरू सम्पूर्णले मलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएकी छु।
उही तपाईंकी छोरी, श्वेता खड्का
रुसले तोक्यो कोरोना खोपको मूल्य, कती पर्छ नेपाली ?
रिमाको आफ्नै स्टाइल [१५ तस्बिर]
आजको राशिफल : यी ५ राशिका लागि अशुभ
यी ६ अभिनेत्रीः जो प्रेममा पटक पटक फेल खाए
“जुनियर जेसिज सप्ताहन्त २०२०” को समापन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
नम्रता श्रेष्ठ बनिन् मिस नेपाल
‘राजावादी’को प्रदर्शन रोक्न गृहको निर्देशन, अटेर गरिए बल प्रयोग गर्ने चेतावनी
पाल्पामा दुईजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
भारतीय लहरीमा एम्बुलेन्स ठोक्किँदा बिरामीको मृत्यु
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी
किनेको ३ दिनमै जल्यो ‘हिरो एक्स पल्स’ मोटरसाइकल [भिडियो]